Shuruucda Gaarka Ah…
Kumaan nahay annaga?
Websaydkeena waa: https://www.garsoore.com.
Xogo noocee ayaan ururin? karnaa sababtana waa maxay?
Marka martidu ka tagto faallooyin waxaan soo aruurineynaa xogta lagu muujiyey foomka faallooyinka, iyo sidoo kale cinwaanka IP-ga booqdaha inagoo ku xireyna wakiilka isticmaalaha browserka si nalooga caawiyo ogaanshaha spam – nooc weerarada kamid ah.